DIGAAGGA SALMON ZAGORYSKY: WAA MAXAY QARSOODIGA AH CAAN KA MID AH NOOCYADA THIS? - BEERAHA DIGAAGA
Awowayaasheenu waxay ahaayeen dad aad u fiican marka ay barbar dhigaan digaagga!
Laga bilaabo laga bilaabo tuulada caadiga ah ee tuulooyinka, dhammaan gobollada beeraha, waxay kuu caddeynayaan in tani tahay ganacsi aad u faa'iido leh.
Digaagga ma aha oo kaliya maaddooyinka cusub oo aan ahayn GMO miiska, laakiin sidoo kale ukunta.
Haddii aad rabto in aad bilowdo digaagga digaagga, oo aadan ogeyn waxa jeex ah ee dooran, ka dibna digaagga Zagorsky salmon waa wax aad u baahan tahay.
Waxay yihiin: Cunto cunto, haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxay ka heli karaan cuntada cagahooda, adag tahay, difaac adag, kalsooni, xasilooni leh.
Laakiin, waxyaabaha ugu horreeya ee ugu horreeya. Marka xigta, waxaanu qori doonaa oo kala gari doonaa dhammaan macluumaadka qiimaha badan ee salamka Zagorsk.
Dhamaan waxaad dhab ahaantii u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan sirta Zagorsk salmon ama sharaxaad ka mid ah taranka
Tani waxay ka mid ah digaagga waxaa la dhigay bred oo ku saleysan Beelaha afar afeed. Rhode Island iyo Jurlov, New Hampshire iyo Ruushka Ciraaq. Kadibna F1 waxaa la wareegay xeryaha Jurlov iyo Rhode Island.
Shimbiraha asalka ah ee loo adeegsado isgoyska ayaa lagu kala saaraa heer sare oo waxtar iyo wax soo saar. Ugu horreyntii, tarbiyada noocaan ah waxaa lagu fuliyay nooca dadka xiran.
Ka hor intii aan la bilaabin digaagga Zagorian digaagga, hawshu waxay ahayd in la helo shimbiraha in ay yeelan lahaayeen: miro aad u sarreeya, wax soo saarka ukunta wanaagsan, hilibka wanaagsan iyo tayada calafka, taas oo lahaan lahayd awood u lahaanshaha isticmaalka cufan sare. Shaqadani si buuxda ayaa loo dhammeeyey.
Marka ay asaas tahay, noocyadan digaagga waxaa loola jeedaa nooca hilibka hilibka hilibka-caadiga ah.
Digaagga Salmon Zagorsky waxaa lagu gartaa cabbir aad u fiican.
Next, waxaan soo bandhigi doonaa sifooyinka dabiiciga ah ee Zagorsky salmon ee digaagga, taas oo, si kastaba, waxay kaa caawin doontaa inaad diirada saarto heerarka jilicsan oo leh habka ku habboon ee taranka:
Madaxa digaagga salmon wuxuu leeyahay qaab isku dhafan, mid yar, mid dhexdhexaad ah;
Gagaashu way yar tahay, oo jilicsan;
Indhuhu waa jaale huruud ah;
Shanladu waa mid kacsan ama qaab-caleen ah, oo qiyaas dhexdhexaad ah;
Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah, wax yar ka yara adag yahay;
Kaadi dhererka inta badan waa mid dhexdhexaad ah, casaan;
Dhagaha maqalka waa casaan;
Xabadku waa mid qoto dheer, ballaadhan oo ballaadhan;
Dhabarku waa mid ballaaran oo dabaq ah;
Jidhku waa mid ballaaran, qoto dheer, dheer;
Muruqyada murqaha ayaa si fiican loo horumariyey;
Calooshu ma xirnaato, cufka;
Maqaarku waa midab leh jaale hurdi ah;
Dabadeedu waa yar tahay, aan lahayn cufan;
Baalalku waxay ku haboon yihiin jirka;
Lugaha waa jaalaha, dhererka dhexdhexaad ah, ma laha boomaato.
Laba nooc ayaa lagu kala saari karaa midabka duufaanta: salmonids, kaas oo cayayaanka uu leeyahay foomka caleen-qaabka iyo kuwa cadaanka ah - shanlo jilicsan.
Waxaa haboon in la ogaado in caanaha this ee digaagga waxaa lagu gartaa farqiga jinsiga caan ku ah midabka ee daloolka. Oo waxaa la arki karaa ku dhowaad isla markiiba ka dib muuqaalka daboolka ee baaldiga: diraac, iyo sidoo kale baadiyaha duulimaadka ee digaagga waxay leeyihiin midab khafiif ah oo madow, iyo qoolleyaal - u dhow madow.
Dhabarka, garbaha, qoorta digaagga ayaa ah casaan cad, iyo laabta waa salmon ama caddaan. In roosters: on dhabarka tiro badan oo baadad ah oo midab madow iyo madow madow, baalasheeda waxaa lagu daboolay baal mugdi guduudan. Qalab, xabadka, caloosha - madow.
Salmon Zagorsky waxay leedahay faraqa u dhexeeya galmada oo kaliya maaha calaamadaha dibadda, laakiin sidoo kale tilmaamayaasha. Celceliska miisaanku wuxuu udhaxmaa 3 ilaa 3, 6 kiilo, iyo digaagaha - laga bilaabo 2, 5 illaa 2, 7 kiilo garaam.. Ilaa hadda, noocaan ah digaagga, daaqsinka iyo ururinta kaydka hidaha, iyo beeraha shakhsiga ah.
Faa'iidada ugu badan ee tayada this ee digaagga
Zagorskaya lalabada salmon waxaa lagu gartaa jiidasho leh. Tani waxaa la sheegi karaa marka la eego beeraha xajmiga ah ee caadiga ah, iyo marka la eego shimbiraha waaweyn ee shimbiraha. Faa'iidooyinka caanaha waa:
Xasaasiyad xooggan: marka la barbardhigo nuucyada kale ee kale, hungurigaas ayaa la sheegay inuu yahay mid aan la isku hallayn karin;
Qarsoodi la'aanta: "Meeshaan tagay, waan ku heli lahaa" ereyadaas mid ayaa inta badan ku tilmaamaya caanaha salamka Zagori;
Dareemis: adigoo ka soo xulaya arrimaha mawduucyada, waxay ku noolaan karaan keega caadiga ah ee digaaga.
Nasiib darro, caqli-gal, dabeecad xumo;
Shimbirta waxaa loo isticmaali karaa sidii haadi ah, ma ahan mid gabi ahaanba lumisay dareenka wax soo saar;
Waxsoosaarka ukunta sare iyo mid deggan.
Faa'iidada kale ee muhiimka ah ee digaagga salad-dhaqameedka Zagorsk ayaa ah suurtogalnimada in la isticmaalo bacriminta hilibka ee isku dhafan ee abuurista foomamka. Waa in la ogaadaa inaad isticmaali kartid iyo dusha sare iyo digaagga.
Sidee faa'iido u tahay in la jaro broilers, laga yaabe, ma jirto baahi faahfaahsan. Qodobbada waqti gaaban (ilaa 80 maalmood) waxay gaari karaan miisaan weyn (illaa 1, 5 kiilo garaam) iyo tayada hilibka oo aad u fiican.
Tiro yar tusaalooyin ah abuurista Beelaha - Bacaha waaweyn ee hilibka, oo ka dhalatay isgoysyada guulaystay:
Haddii aabbuhu doorto wakiil ka mid ah Jubilee Kuchinsky Jubilee ama Cornish, iyo saldhigga hooyada waa salmon Zagorskaya;
Aabaha Zagorsky, iyo hooyada ka timid New Hampshire ama ka soo jeeda Plymurt;
Aabaha Salam Zagorsky, hooyo - Adleran digaag lacag ah.
Natiijadu waxay ku farxi doontaa dhadhan fiican iyo baqdin leh. Faa'iidooyinka noocan ah waa kuwo cad.
Haddii aan ka hadalno cilladaha ay sameeyaan salmon Zagorsky salmon, ka dibna ma aysan dhicin. Miyuu yahay sheeko xiiso leh, waxay had iyo jeer leeyihiin waqti waxayna awoodi doonaan inay dhadhamiyaan beertaada.
Maxaa kala soocay midabka digaagga ee salamka Zagorsky?
Muuqaal astaamo ah oo shimbiraha ka mid ah noocyada salmon Zagorsk polyformism ka soo da 'yar. Digaagga maalinlaha ah ayaa si sahlan loogu kala saari karaa digaagga iyo cockerels: "gabdhaha" dhabarka waxay leeyihiin "guska galmada" - guntooda casaan-guluubka ama qaabka lafdhabarta, "wiilasha" midabka waa midab hurdi ah oo aan lahayn pigmentation.
Horeba maalinta saddexaad, midab buluug ah ayaa bilaabmaa inuu sameeyo digaagga: maadada miro-madow-madow waxay u muuqdaan ragga, iyo casaan-bunni ee digaagga. Maalinta tobnaad, farqiga midabka ee u dhexeeya jinsiyada ayaa si cad u qeexaya in ay adagtahay in qaladka la sameeyo markii la go'aamiyo jinsiga.
Tani waa mid xiiso leh! Midab isku mid ah, oo lagu tilmaamayo magaca caanaha, kaliya waa shakhsiga "haweenka" - waxay leeyihiin midab caano ah oo caan ku ah naaska. Guntinta musqusha waa midab madow ama casaan.
Zagorsky Salmon wuxuu leeyahay hal farqi oo qiimo leh: iyaga Si dhakhso ah ayey u koraan oo miisaankana si deg deg ah u korodhaa. Ciraaqiyiin iyo guud ahaan waxay garaacaan diiwaanada, muddo saddex bilood ah waxay gaari karaan miisaankoodu yahay 1,7 - 2 kiilo.
Ma digaagada salmon Zagorsky ma runbadani caddaynaysaa cinwaanka digaagga? Intee ayuu sarreeyaa muujinta wax soosaarka ee noocaan ah?
Miisaanka nool wuxuu u yahay dabeecadaha digaagga ee isticmaalaha caadiga ah, taas oo kale waxay astaan ​​u tahay salamka Zagorsky. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu tilmaami karaa midho xoog leh, wax soo saarka ukunta (oo aan ka duwaneyn digaagga oo leh jihada taranka), miisaanka ukumaha sare, tayada sare ee caloosha iyo awooda lagu isticmaalo qadar weyn oo ah quudin weyn.
Intii lagu guda jiray tijaabooyinka Machadka Cilmi baarista ee digaagga, waxsoosaarka ukun celceliska wuxuu ahaa 165 ukumood oo madax ah. Haddii natiijada laga soo qaatay buulasha iyo kooxo shakhsi ahaaneed, ka dibna wax soo saarka ukunta celcelis ahaan madaxu wuxuu ahaa 172.5-180.4 ukumo.
Roodhadhka rikoodhka cad ee rikoodhka ah ayaa qaaday 227 ukun oo kasta. Digaagga rikoodhka rinjiga ku riday salmon ayaa qaaday 216 ukun oo kasta.
Ukunta ukuntu waxay leedahay midab madow iyo cufnaanta sare. Miisaanka hal ukun ee marxaladaha hore ee ukunta-qashinka (qiyaastii 34 asbuuc) waxay u dhigantaa 45-47 g, iyo 52 toddobaad ee nolosha ah waa 60-62 garaam.
Maqaarka digaaga caadiga ah ee culeyskiisu yahay 50 garaam, wuxuu ka kooban yahay 40 magacyada walxaha ugu waxtarka badan ee lagama maarmaanka u ah jirka bini-aadamka. Haddii aad jilciso this digaagga, ka dibna waxaad ka fili kartaa "ganacsiga digaaga" iyo dakhliga.
Digaagga salmon Zagorsky marwalba way ku raaxaysteen waxayna ku jiraan baahida weyn ee dadka. Waxyaabahan waxaa lagu sharxi karaa tayada sarreysa, iyo sidoo kale wax soo saarka wanaagsan.
Bacriminta ukunta waa ugu yaraan 91%, hatchability waa ugu yaraan 75% -80%. Heerka ugu sarreeya ee ilaalinta xayawaanka dhalinyarada - 93%, digaagga dadka waaweyn - 92%. Kooxdani digaagga ah marnaba ha u oggolaan inay martigeliyaan inay wax soo saarkooda ama dabeecad ahaan.
Digaagga toddoba bilood jirka ah, miisaanka nool wuxuu gaari karaa 0,85 kiilo garaam, qoob ka ciyaarka isla mudadaas - ilaa 1 kilo. Miisaanka nool ee digaagu waa 27 kiilogaraam, halka qoob-ka-shaqeeyuhu yahay 3.7 kiilo garaam. Qaangaadhka jinsiga ee digaagga wuxuu bilaabmaa 150-180 maalmood da'da. Soo-saarka ugu weyn ee ukunta ayaa dhacda 29-32 asbuuc noloshiisa.
Haddii aad doorato ukumo ku yaal dukaamada dukaamada ama suuqa, ka dibna shaki la'aan, digaaga ee digaagga salamka Zagorsky waa la aqoonsan doonaa. Waxay aad u badan yihiin marka loo eego ukumaha kale. Iyo, dabcan, midabkooda midabkiisu yahay midab khafiif ah ayaa sidoo kale lagu xisaabinayaa tusahan.
Sidee si habboon u daryeelaan salmon Zagorsk? Baro dhammaan sifooyinka qeexaya
Haddii aad tahay dhalo leh waayo-aragnimo, ama hiwaayad, waxaanu ku faraxsanahay inaan ku faraxsannahay: ma jiraan wax murugo oo gaar ah oo ku saabsan nooca caanahan! Xaqiiqdii! Salmon Zagorsky gabi ahaanba aan qabyo ahayn, u adkee baraf adag, xitaa fadhiya barafka, waxay dareemi karaan raaxo, waxay u dhowdahay cawska guga.
Laakiin, sida shimbir kasta, ugu yaraan ugu yaraan daryeel, haa tahay. Sidaa daraadeed, kuma talineyno inaan bixino dareenka shuruudaha ilaalinta caanahan. Dabcan, waa in la siiyaa coop digaag leh oo caano ah, quudiyo, cirif, socodka joogtada ah. Qolka waa in la daboolo.
Waxaa haboon in la ogaado in salamka Zagorsky ay u muuqato inuu sare u qaado, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in derbiyada digaaggu ay sare u kaceen. Baahida Banaadir waa ilaalinta sharciyada nadaafadda iyo nadaafadda.
Dhulka guriga hoyga waa in la buuxiyaa ciid nadiif ah ama balka. Waa inuu had iyo jeer ku garaacaa qalalan. Marka ay wasakh noqoto, isbeddel. Waxaa loo baahan yahay waqti ka waqti qaado tallaabooyin guud oo ka hortag ah: diidmada, jeermi-dilista, derajinta.
Waxaa habboon in la ogaado in xitaa "dhaggan" dhagax weyn leh oo aan daryeel lahayn oo ka soo horjeeda heerka hoos u dhaca wax soo saarka. Dayactirka joogtada ah ee heerarka nadaafadda iyo nadaafadda ayaa ah shuruud, ugu yaraan, ukumo nadiif ah.
Muuqaal muhiim ah oo loogu talagalay horumarinta difaaca, iyo qaabka jireed, iyo in la xoojiyo dheef-shiid kiimikaad - waa socotaa. Socodka digaagga waa mid muhiim ah. Ku ilaalinta qafis waa wax aan micno lahayn.
Razvodchiki khibrad leh, oo aan sabab la'aan, digaagga, si joogto ah u joogaya qorraxda, hawo cusub, waxay siisaa alaab tayo sare leh. Tusaale ahaan, digaagga kuwaas oo loo isticmaalo socodka, ukumaha waxaa ka buuxsamey qayb ka mid ah fitamiinada iyo awooddooda kaadida waxay sareeyaan.
Noocaan noocaan ah waa mid aad u mobile, waxay awood u leeyihiin inay helaan meelo bannaan si ay u galaan beerta, beerta. Weerarkooda lama huraan. Gaar ahaan inta badan waxay taasi dhacdaa marka ay jirto cunto la'aan iyo raadin madax bannaan oo cunto ah. Taasi waa sababta badanaa ka mid ah milkiilayaasha waxaa jira ra'yi ku saabsan ciqaabta Zamorsky salmon by xaddidaadda xorriyadda.
Haddii aad rabto inaad hesho faa'idada ugu badan ee ilaalinta shimbiraha - sii daa "nolol wanaagsan".
Waxaa sidoo kale xiiso leh in la akhriyo hilibka iyo ukunta digaagga ee digaagga.
Digaagga quudinta, dooro cuntada saxda ah
Wakiilo ka socda Zagorsky Salmon ayaa lagu beeray cunto aan qabin. Xitaa hadhaaga miiska, way ku farxi doonaan. Badanaa tuulooyinka, digaagga waxaa lagu daaweyn karaa dhagaha baradho la kariyey, oo weli ah maraqa kaabajka - digaagga ayaa ku farxi doona cunto kasta oo la soo jeediyey waxayna ku farxi doonaan inay cunaan dhan dhan.
Oo weliba, waa suurad wacan in ay u isticmaalaan siiriyal ah sida feedka ugu weyn, nooc kasta, oo ay ku jiraan hadhuudh, tanina waa shimbiro ka soo jeeda weyn. Corn waa in la siiyaa wax bilaash ah laba bilood ka dib.
Ma awoodo ku darso cunto kasta oo quudin ah, waxay si fiican u arkaan, marka laga reebo, waxay ka kooban tahay dhammaan waxyaabaha maaddooyinka looga baahan yahay koritaanka iyo caafimaadka wanaagsan. Waxa ugu muhiimsan waa in la isku dheellitiro qayb ka mid ah quudinta.
Haddii socodka aan macquul ahayn, saliidda kalluunka waa inay ku jirtaa cuntada, caanaha waa in lagu daraa cuntada. Waxay hagaajinaysaa dheefshiidka.
Digaagga waa in la cunaa hadhuudh hore loo burburiyey. Si tartiib ah u soo bandhig caleemaha, cagaarka, iyo khudradda kala duwan ee cagaarka. Waxaad ku dari kartaa lafaha la jarjaray, khamiirka cuntada. Xaddiga iftiinka nolosha nolosha Zagorsk salmon
Adiga ayaa kugula jira si aad u go'aamisid tirada iftiinka nolosha nolosha Zagorsk saloon, waxaanu ku tilmaami doonnaa kaliya qadarinta iyo xayawaanka sii socda ee iftiinka dabiiciga ah.
Oo sidaas, haddii lagu jiro quudinta ee digaagga aad ku dar nalal dheeraad ahTani waxay shaki gelineysaa hannaanka ukunta dhirta. Laakiin, tayada ukumahani waxay noqon doontaa mid aad u hooseeya, kuwaas oo markaa ka dib iman doona maalinta iftiinka dabiiciga ah. Ukunku maaha mid aad u ballaaran sida digaagga la keenay. Sidaa daraadeed, maya wax laga reebo waa in la yareeyo waqtiga si loo bilaabo gelinta.
Iftiinka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha digaagga qaangaarka ah. Dambiyada daaqadaha digaaga ah. Qorraxdu waa kan ugu fiican ee jeermiska. Xaaladdan oo kale, iftiinka qorraxdu waa inuu galaa guryaha digaagga, ka dibna tiro badan.
Windows waa inaan la samayn meel sare oo dabaqa sare ah - oo ah dherer ahaan 50-60 sentimitir. Sidaa darteed, iftiinka daaqadaha hoostiisa ayaa ku filan. Waa suurad wacan in daaqadaha ay ahaayeen kuwo waaweyn. Waxaad xisaabin kartaa aaggooda guud sida soo socota: qiyaastii 8 m2 oo dhulka bannaan ah waa in ay kudhacdaa illaa 1 m2 ee muraayadda. Xilliga xagaaga, muraayadaha noocan ah ee leh dhalada waxaa lagu beddeli karaa mesh biraha qafiif ah. Sidaa darteed, hawo-qaadashada ayaa la abaabuli doonaa.
Heerkulku, sidee ayuu muhiim u yahay arintan?
Digaagga salmon Zagorsky waa in loo daayo socodka. Iyadoo aan loo eegin haddii ay jirto caleenta dhirta ama maahan. Deegaanka socodka waa in uu ahaado xaalad dabiici ah, oo celcelis ahaan celcelis ahaan iyo celceliska heerarka cimilada sanadlaha, roobabka, cadaadiska hawada, qoyaan, qorraxda, iwm.
Xaaladaha noocan oo kale ah, heerkulka, ayaa si gaar ah faa'iido ugu leh tan noocyada shimbiraha. Digaagga salmon Zagorsky waa caano beedka fudud, waa ma aha mid aad u xasaasi u ah isbeddelka heerkulka, marka la barbardhigo hilibka iyo ukunta waaweyn iyo ukunta.
Haddii guriga uu si fiican u daboosho jiilaalka, iyo xagaaga waa hawo wanaagsan oo nadiif ah, ka dibna digaaga ayaa ku farxi doona wax soo saarka ukunta iyo sifooyinka sare ee calafka, iyada oo aan loo eegin heerkulka isdhexgalka garoonka.